''သမ္မတကြီးထံပေးစာ'' ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် သုံးရက်တိုင်တိုင် သွားရောက်ြ? - Yangon Media Group
”သမ္မတကြီးထံပေးစာ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် သုံးရက်တိုင်တိုင် သွားရောက်ြ?
‘သမ္မတကြီးထံပေးစာ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် သုံးရက်တိုင်တိုင်သွားရောက် ပြသမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ သမ္မတကြီးထံပေးစာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ Carnival Cinema (Golden Mile) တွင် ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရက်မှ စတင်ကာ ဒီဇင်ဘာ ၁၆ ရက်အ ထိပြသသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ”သမ္မတကြီးထံပေးစာ”ရုပ် ရှင်ဇာတ်ကားကို စင်ကာပူမှာသွားပြဖို့ရှိပါတယ်။ စင်ကာပူမှာ တော့ သုံးရက်ပြသမှာပါ။သမ္မတ ကြီးထံပေးစာ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားက ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုလည်း ရရှိသလို မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာ ဆရာအသင်းရဲ့အသိအမှတ်ပြု ခြင်းခံရတဲ့အတွက်လည်း ဖန်တီးသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ဝမ်းသာရ ပါတယ်”ဟု ဒါရိုက်တာ ဝိုင်းက ပြောသည်။
‘သမ္မတကြီးထံပေးစာ’ရုပ် ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ဇာတ်ညွှန်းရေးသားသူ၊ ရိုက်ကူးပုံဖော်သူနှင့် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ကြသူများကို မြန်မာနိုင်ငံ သတင်းစာဆရာအသင်း (MJA) မှ ဂုဏ်ပြုသည့် အ ခမ်းအနားတစ်ရပ်ကို ဒီဇင်ဘာ ၆ ရက်တွင် Orchid Hotel ၌ပြု လုပ်ခဲ့သည်။ ”ဖွေး အနုပညာသက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ ရုပ်ရှင်ဇာတ် ကားတွေအများကြီးကို ရိုက်ကူးခဲ့ ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အခုလို မျိုး အသိအမှတ်ပြုခံရပြီး ဂုဏ်ပြု ခံရတာကတော့ ပထမဦးဆုံးပါပဲ။ ဖွေးအရမ်းကိုဝမ်းသာပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာလည်း ဒီထက်ပိုပြီး တော့ ကြိုးစားသွားပါမယ်”ဟု သရုပ်ဆောင်ဖွေးဖွေးကပြောသည်။
‘သမ္မတကြီးထံပေးစာ’ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားသည် သတင်းနှင့်စာနယ်ဇင်းဆရာများကို အကျိုးပြု ဂုဏ်မြင့်စေခဲ့သည်အတွက်ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသတင်းဆရာအသင်းမှ ဂုဏ်ပြုခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသတင်းစာဆရာအသင်းသည် ”သမ္မတကြီးထံပေး စာ’ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ခဲ့သော စိန်ဌေးရုပ် ရှင်ထုတ်လုပ်ရေး၊ ဖန်တီးသူ ဒါရိုက်တာနှင့် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ကြ သော အနုပညာရှင်များကို ဂုဏ်ထူးဆောင်အသင်းသားအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ ‘သမ္မတကြီးထံပေးစာ’ရုပ် ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကို ဒါရိုက်တာ ဝိုင်းမှ ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားပြီး သရုပ်ဆောင် အလင်းရောင်၊ချမ်း မင်းရဲထွဋ်၊ ဖွေးဖွေး၊ မေဆူးမောင် အစရှိသော အနုပညာရှင်များမှ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားကြသည်။
စင်ကာပူတွင် အိမ်အကူလုပ်ပြီး ပြန်ရောက်လာသူ အမျိုးသမီး ရလာသည့် လုပ်အားခများ ကျပ်တစ်သောင်းတန
တရုတ်ထိပ်တန်း အနုပညာရှင် ၁၇ ဦးထက် မနည်း အခွန်တိမ်းရှောင်ကြောင်း ဝန်ခံ
Running Man အဖွဲ့သား လီဂွမ်ဆူနှင့် မင်းသမီးလီဆွန်ဘင်းတို့ တွဲနေကြောင်း အတည်ပြု
စာပေလောကသို့ ဝင်ရောက်ရန် ပြင်ဆင်နေသူများအတွက် စာပေဖန်တီးမှု အနုပညာသင်တန်း မေ ၁၄ ရက်တွင် စတင
လွှတ်တော်တွင်းနှင့် လွှတ်တော်ပြင်ပ ဟန်ချက်ညီစေရန် လုပ်ဆောင်သင့်ဟု ကိုမင်းကိုနိုင် ဆို
ကမ္ဘောဒီးယားတရားရုံးက အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်ကို ဒေါ်လာတစ်သန်း ဒဏ်ရိုက်